Akụkọ - Ihe kpatara OLED ji nwee ahụike karịa LCD
Ihe kpatara OLED ji nwee ahụ ike karịa LCD
Obere ọkụ na-acha anụnụ anụnụ, ngosi ụcha OLED dị mma maka anya mmadụ na ihe ndị ọzọ na-eme ka OLED dị mma karịa LCD. Ndị enyi na-agakarị ọdụ B na-anụkarị ikpe a: Barrage Eye Protection! N'ezie, Achọrọ m ịgbakwunye nchebe Buff na onwe m, You ga-achọ ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ TV nke OLED. Nnukwu ọmụmụ a na-eme n'ụlọ na mba ofesi na-egosi na screens OLED meziri nwere uru dị mkpa karịa ahụike karịa Igwe LCD. Ma ọ dịkarịa ala n'oge a, Ekwentị mkpanaaka na TV ndị nwere OLED bụ ngwaọrụ ndị nwere ntakịrị mmebi n'anya. Ezinụlọ ọ bụla nwere ụmụ, All kwesịrị ịhọrọ ngosipụta OLED. Ọbụna anyị nwere ike ikwu nke a: Chohọrọ ngwaọrụ OLED bụ ịhọrọ ahụike.
Na-ekpughe ụkpụrụ nke ihuenyo ọdịnala na-emerụ anya
Ihe abuo nke na - akpata “mmerụ anya” na omenala LCD / Ikanam ihu igwe bụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ na ọkụ.
Ka anyị malite site na Blu-ray.
Igwe ọkụ bụ ọkụ a na-ahụ anya dị elu, A kwenyere na ya nwere mmetụta na-emerụ ahụ dịka nkasi obi na mmebi anya, Ọ bụkwa ihe na-eduga n'ọrịa dịka ọrịa kansa, ọrịa shuga, ọrịa obi, oke ibu na ehighị ụra.
Blue ìhè bụ ndị kasị elu ike wavelength nke anya ìhè. Ike a nwere ike iru site na nzacha nke anya na anya nke anya.
Ọnụ ọgụgụ nke ọkụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ anyị na-enweta site n'iji ngwaọrụ dijitalụ na-arịwanye elu ngwa ngwa kwa ụbọchị, Nke a emeela ka anya anyị ghara ịla n'iyi. Mmetụta nke ọkụ na-acha anụnụ anụnụ na-achịkọta, Nwere ike ịkpata ọrịa anya, Dị ka mmebi nke macular.
Karịsịa ụmụ, ndị retina bụ nnọọ emebi emebi, Ọ bụ ngwangwa-acha anụnụ anụnụ ìhè. Nnyocha na-egosikwa na ， Ngosipụta na ọkụ na-acha anụnụ anụnụ tupu ị lakpuo ụra na-egbochi secretion nke melatonin, Ma na-egbu oge ụra ụra miri emi. A na - emetụta ahụike dị njọ. Na ogologo oge, Nke a nwere ike ibute ndapụ uche na mmepe nke ọrịa na-adịghị ala ala.
Karịsịa-acha anụnụ anụnụ ìhè mmebi nke smart phones, Ọ kwubara ụzọ n'etiti niile ngwaọrụ. N'ihi na ebe dị anya nke iji ekwentị mkpanaaka na-adịkarị nso na ngwaọrụ eletrọnịk ndị ọzọ, Na-enwekarị ọchịchọ iji ya n'ọchịchịrị, Mmebi ahụ na-adịkarị elu.
Flicker nwekwara ike ịkpata "mmerụ anya".
Flicker bụ mgbanwe a na-ahụ anya na nchapụta n'etiti usoro okirikiri gosipụtara na ngosipụta vidiyo. O kacha adaba maka igwe onyonyo cathode ray (CRT), igwe kọmputa, na kọmpụta plasma na telivishọn.
Gbanwe ọkụ ọkụ na-akpata nchapu ọkụ. Ngwa ngwa ngbanwe ọsọ ahụ, ngwa ngwa ngebichi na-agba ọsọ. DC dimming bụ teknụzụ na-agbanwe nchapụta site na ịchịkwa ugbu a n'akụkụ abụọ nke ngwaọrụ na-enwu ọkụ ， Kasị LCD ihu na-eji DC dimming. DC dimming n'onwe ya bu uzo di nfe. Mana o nwere oke ọghọm ya. N'ihi na nke dị iche iche wavelength nke atọ bụ isi agba, DC dimming ga-eme ka-apụghị izere ezere agba nnofega mgbe ihie dị oke ala. Nke a na - ebute ike ọgwụgwụ anya.
Omenala LCD / Ikanam meziri, N'agbanyeghị nke akụkụ, Ma bụ ndị kasị mma nhọrọ maka ahụ ike.
Nkọwa nke nyocha ihu anya OLED n'ụlọ na mba ofesi
ma, Ma ọmụmụ ụlọ na nke mba ọzọ egosila na ， OLED dị ezigbo mma karịa LCD.
Na Machị nke afọ a, ụlọ ọgwụ Beijing Tongren Hospital nke jikọrọ aka na Mahadum Ahụike Na-ahụ Maka Ahụike mere ule dị mkpa na ahụike OLED. Ihe nnwale ahụ gụnyere ule na-acha ọkụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ, ike ọgwụgwụ nke anya nke anya-nlele nkasi obi anya, nyocha nke anya-anya nnabata anya na OLED TV na QD-LCD TV.
Nsonaazụ ule ahụ gosipụtara na ， Ihe ngosi mmebi niile nke OLED TV dị ala karịa nke QD-LCD TVs. Nkwubi okwu a bu, Nchapu acha anụnụ anụnụ nke OLED TV pere mpe karịa nke QD-LCD TV, N'otu oge ahụ, mmetụta na ike ọgwụgwụ na-adịkarị obere.
ya mere, Ike ọgwụgwụ na-ekiri mgbe ịlechara OLED TV ruo ogologo oge ga-adị nnọọ ala karịa nke QD-LCD TV. Mma ahụike na nchekwa dị mma.
Ọ bụghị naanị na TV, Otú ahụ ka ọ dịkwa na ekwentị mkpanaaka.
Ọktọba 2018, Nnyocha sitere na Mahadum Tsinghua dị na Taiwan na-egosi na ， Ngosipụta OLED nke iPhone XS ọhụrụ na XS Max dị mma karịa ngosi LCD na ụdị iPhone gara aga.
Dika akuku nke nyocha ya na “Iguzogide oria na ocha oku” nyocha, ndi nyocha nke Taiwan na Tsinghua University ("National Tsing Hua University") ndi Prọfesọ JHJou duziri ka ndi OLED gbara ogologo oge.
Na 2015, Prọfesọ JHJou nyere otu arịrịọ, Na-achọ ndị na-azụ ahịa ka ha ghọta ihe ọghọm nke ndị LED, Ndị gọọmentị kwesịrị ịme iwu ọhụụ, ọ bụ iwu na ngwaahịa ndị nwere ọkụ ga-egosi n'ụzọ doro anya ụdịdị ha dị.
Ọmụmụ ihe a na-atụle ihe ngosi abụọ n'etiti iPhone 7 na ngosi LCD na iPhone XS Max kachasị ọhụrụ na ngosi OLED 6,5-inch.
Nke mbu bu oke ikpughe (MPE).
Nke a bụ oge nke oge tupu retina iwe ọkụ mgbe ekpughere ya na ihuenyo. Nnwale ahụ dabeere na ọkụ ọkụ nke 100 lx. MPE nke iPhone 7 bụ 288 sekọnd, MPE nke iPhone XS Max bụ 346 sekọnd, Nke a pụtara na OLED dị nchebe karịa LCD.
Ihe ngosi nke abuo bu Melatonin Suppression Sensitivity (MSS). Nke a bụ mmụba emetụtara, Ejiri iji gosipụta pasent tụnyere nchacha ọkụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ, 100% MSS yiri ịlele ọkụ na-acha anụnụ anụnụ. OLED na-arụ ọrụ nke ọma-MSS nke ihuenyo iPhone 7 LCD bụ 24.6%, MSS nke ihuenyo iPhone XS Max AMOLED bụ 20.1%.
N'ezie, Ọmụmụ mba ọzọ egosila nsogbu a.
Medialọ ọrụ mgbasa ozi nke America REWA bipụtara akụkọ a kpọrọ “Olee nke Na-emerụ Anya Anya? OLED ka ọ bụ ikanam? ” na Febụwarị afọ a.
Ọgwụgwụ nke akụkọ a bụ: OLED nwere ike belata ọkụ na-acha anụnụ anụnụ.
Otu ụlọ ọrụ na-enyocha nnwere onwe dị mma nke akpọrọ Intertek na United Kingdom kwubiri na, ọkụ na-acha anụnụ anụnụ nke ọkụ OLED na-ewepụta bụ ihe na-erughị 10% nke ọkụ na-acha anụnụ anụnụ nke ọkụ oriọna na-enye na otu ọkụ na agba agba.
Anyị nwere ike ịhụ ihe ngosi site na tebụl dị n'okpuru.
Nsogbu ọzọ bụ ihe ngosi agba.
Anyị niile maara na ngosipụta AMOLED bụ ihe eji emepụta ihe ọkụkụ na-enwu enwu. Ọ naghị achọ ọkụ LCD, n'ihi na mgbe ọkụ ọkụ na-agabiga na ihe ndị dị na mbara igwe, pikselụ ahụ na-enye ọkụ n'onwe ha. ya mere, E jiri ya tụnyere ihu igwe LCD nkịtị, OLED gosipụtara uru dị ka iche dị elu.
Anyị nwere ike ịhụ ihe dị iche na abụọ site na foto dị n'okpuru.
N'okwu kachasị mfe, OLED gosipụtara nwa dị ọcha ojii,, LCD bụ isi awọ. Mgbe LCD nwere nnukwu ọdịiche dị na nchapụta nke otu ihuenyo ahụ, enwere ihe omuma nke nkọwa edoghị anya na akụkụ ndị gbara ọchịchịrị na foto ndị na-apụtachaghị ìhè na akụkụ ndị na-enwu gbaa. Emetụta ahụmịhe a na-ahụ anya, Mee ka ike gwụ gị.
Ekele maka teknụzụ na-enwupụta onwe ya, OLED nwere ike igosipụta "nwa zuru oke" n'ezie, Ma nweta ọdịiche na-enweghị ngwụcha. Ikike iji chịkwaa pikselụ ọ bụla na-enye ohere ka nkọwa niile dị na OLED TV na-egosipụta n'ụzọ zuru oke na-enweghị mmetụta ncha ihu igwe na-emetụta.
Ihe ngosi dị ọcha nke OLED bụ n'ezie ihe dị mma n'anya mmadụ. Adabara ogologo oge ojiji.
Họrọ OLED pụtara ịhọrọ ahụike
“Myopia” abụwo mgbe mgbe nsogbu bụ́ isi na-enye ndị ntorobịa China nsogbu.
Na 2017, Thetù Ahụ Ike Worldwa wepụtara otu akụkọ nyocha na-ekwu na ， E nwere ihe ruru nde 600 ndị ọrịa myopia na China. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ọnụ ọgụgụ ndị China niile. N'ime ha, ọnụ ọgụgụ myopia nke ụmụ akwụkwọ sekọndrị nke obere na ụmụ akwụkwọ kọleji na mba m gafere 70%. Ihe data a ka na-ebili kwa afọ, Ọnụ ọgụgụ nke myopia n'etiti ndị na-eto eto nọ na mba m bụ ndị mbụ n'ime ụwa.
N'ụzọ dị iche, ọnụ ọgụgụ myopia n'etiti ndị na-eto eto America bụ ihe dịka 25%. Australia bụ naanị 1.3%, ọnụọgụ myopia na Germany ka edobekwara n'okpuru 15%.
“Mbepu na Mgbochi Myopia na Childrenmụaka na Atụmatụ Mmejuputa nke Ndị Na-eto Eto” nke ngalaba asatọ a kpọtụrụ aha wepụtara. Site na 2030, ọnụ ọgụgụ myopia nke ụmụ akwụkwọ praịmarị gbadara na-erughị 38%. Nke ahụ bụ, n’ihe karịrị afọ iri, ọnụ ọgụgụ myopia nke ụmụ akwụkwọ praịmarị gbadara site na pasent 7.7.
Site na nke a, ihu OLED dabara adaba maka ezinụlọ ndị China. Site na mmụba nke otu ndị na-azụ ahịa n'etiti, ndị mmadụ na-ele ihe anya agbanweela n'ihi nke a, Ahụike anya abụrụla ihe ịzụta nke ndị ahịa na-etinyekwu uche na.
Taa, ọtụtụ klas ndị ọzọ na-arụsi ọrụ ike iji meziwanye "mmetụta nke ibu ọrụ" ha, Ọdịdị nke mgbatị na ahụike onwe onye arịala elu, na marathons ndị dị n'èzí aghọwo ụzọ ndụ kachasị. Na nlekọta nke ahụike ụmụaka, ahụike ahụike abụrụla njikọ dị mkpa.
Na ahịa TV dị elu ugbu a, "Ahụ ike anya" abụrụla isi ihe ndị ahịa chọrọ nke ndị ọrụ dị elu, Ezinụlọ ndị ọzọ na-ahọrọ ịhọrọ TV ndị nwere ahụike karị na ndị na-ahụ n'anya.
Aowei Cloud Network (AVC) emeela nyocha dị mkpa maka ndị ọrụ TV dị elu. Ngosipụta data, ngbanwe nke gburugburu oriri na usoro oriri, Na-akwalite echiche oriri site na ikpu ìsì na ntụgharị uche na iche iche na ịdị mma, na ịdị mma na-anọchite elu-elu na ahụike.
N'ihe banyere TV, usoro ezinụlọ nke ndị ọrụ TV dị elu na-abụkarị di na nwunye na ụmụaka. Ọnụ ọgụgụ nke TV ọhụrụ a zụrụ maka ahụ ike ụmụaka ruru 10%.
Na mgbakwunye, N'etiti ngwaahịa ndị nwere nnukwu njirimara nke nwere njirimara ndị ọrụ, OLED TVs enwetala ihu ọma ndị mmadụ nwere akara nke 8.1, N'ime isi ihe mere ndị ọrụ ji ahọrọ TV OLED, "Anya Ahụ Ike" weere 20.7%, nke abụọ naanị nhọrọ abụọ nke "Clear Picture Quality" na "Technology kacha ọhụrụ".
OLED TV nwere uru dị mkpa karịa ahụike ahụike, ọ bụkwa nhọrọ ahụike kachasị mma maka ezinụlọ ndị China.
Nke a dị nnọọ ka ọkà mmụta Dutch Spinno kwuru na-akpali akpali banyere ahụ ike:
Idobe ahụike bụ ọrụ dịịrị ndụ.
Post oge: Jan-23-2021